‘भाडामा कोख’ दिने प्रसङ्ग हिन्दू धर्मग्रन्थमै : कसरी भयो सत्यवती र सीताको जन्म ?
केही समयअघि सरोगेसी मदर (भाडाको आमा) विषयक प्रसङ्ग निकै चर्चित थियो । धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालले शुरू गरेको सो कामसित पंक्तिकार शुरूदेखि नै परिचित थियो ।
यसबारे पंक्तिकारले आफू सम्बद्ध पत्रिकाका साथीहरूसित कुरा गरेको पनि हो तर कारणवश प्रकाशनमा ल्याउन सकेन । तथापि तत्कालै जसो अर्को एक दैनिकले भने शृंखलाबद्धरूपमा प्रकाशमा ल्याउने काम गर्‍यो ।
पछि व्यापक आलोचना भएकाले सो काम बीचैमा रोकिएको थियो । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो यसको शुरूआत अन्यत्र पहिले नै भइसकेको रहेछ र त्यता वैधता पाउन नसकेपछि यहाँ प्रयोग हुन आएको रहेछ ।
यी त भए वर्तमानका कुरा । विगतलाई कोट्याउने हो भने हिन्दू धर्मग्रन्थमा हजारौं वर्षपूर्व नै भाडामा कोख लिने अभ्यास भइसकेको देखिन्छ । यस आलेखमा यसैलाई केलाउने प्रयास गरेको छु ।
हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार कोख सापटी लिने काम सर्वप्रथम महादेव र पार्वतीले गरेका हुन् । उनीहरूलाई तारकासूर नामक असूरको अत्याचार रोक्न ५ मुनिका बालक चाहिएको थियो । यस्तो काम सामान्य व्यक्तिले गर्न नसक्ने प्रस्ट भएपछि महादेवले आफ्नै वीर्यबाट गणेश र कुमारलाई जन्म दिएका थिए ।
यस निम्ति गणेशका लागि कुनै एक मस्त ढोई (हात्तीको पोथी) को खोजी भएको छ भने कुमारका लागि षड्कृतिकाको गर्भ सापटी लिइएको छ । त्यसको लगत्तै जसो हुनुपर्छ भगवान् विष्णुले पनि त्यसै गरेका छन् । उनलाई पनि हयग्रीव (घोडाको जस्तो घाँटी भएको) नामक दानवले नष्ट गरेका सनातन मर्यादा बचाउन ऊ जस्तै जीवको आवश्यकता परेको रहेछ । त्यसैले उनले त्यस्तै जवान घोडीको कोख सापटी लिएर त्यस्तै जीव जन्माएका थिए, जसलाई उनको हैहय अवतार भनिन्छ ।
वैदिक ग्रन्थका अनुसार सप्तऋषिमध्येका भरद्वाज र वशिष्ठ जस्ता महर्षिहरू पनि सापट लिइएको कोखबाट जन्मेका सन्तान हुन् । महर्षि भरद्वाज देवगुरु बृहस्पतिका पुत्र हुन् । उनलाई जन्माउन बृहस्पतिले आफ्नै भाइ उतथ्यकी पत्नी ममताको गर्भ सापटी लिएका छन् ।
महर्षि वशिष्ठ मैत्रावरुणका पुत्र हुन् । उनलाई जन्माउन मैत्रावरुणले उर्वशी अप्सराको कोख सापट लिएका छन् । सूर्यपुत्र अश्विनिकुमार पनि यस्तै कोखका उपज हुन् । उनीहरूका लागि सूर्यदेवले उत्तर कुरुदेशकी एक घोडीको कोख प्रयोग गरेका छन् ।
रामायण र महाभारतमा यसको लामो शृंखला भेटिन्छ । महाभारतको सूत्राधार सत्यवती आफैं भाडाको कोखबाट जन्मेकी प्रभावशाली नारी हुन् । उनलाई जन्माउन बुवा उपरिचर वशुले कुनै जलचर प्राणी मत्सीको कोख सापट लिएका छन् । पछि महर्षि परासरले तिनै सत्यवतीकै कोख सापटी लिएर व्यासलाई जन्माएका छन् । पछि गएर तिनै व्यासले समेत घृताची अप्सराको कोख सापटी लिएर शुकदेवको जन्म दिएका छन्, जसले श्रीमद्भागवत पुराण सुनाएर पाण्डव पौत्र परीक्षितको उद्धार गरेका थिए ।
महाभारतका पात्रहरू द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर समेत भाडाकै कोखका उपज हुन् । महर्षि व्यासले भाइबुहारीद्वय अम्बिका र अम्बालिकाको कोख सापटी लिएर क्रमशः धृतराष्ट्र र पाण्डुलाई जन्म दिएका छन् भने सन्तशिरोमणि विदुरका लागि दाशी (मनोरमा ?) को कोख भाडामा लिएका छन् ।
महारथि द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाजका पुत्र हुन् । उनलाई जन्माउन भारद्वाजले घृताची नामक अप्सराको कोख सापट लिएका छन् । गुरु कृपाचार्यको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । उनका बुवा महर्षि शरद्वान् हुन्, जसले उनका निम्ति जानपदी नामक एक देवकन्याको कोख सापटी लिएका छन् ।
महारथि कर्ण लगायत पाण्डवहरू समेत भाडाकै कोखका उपज हुन् । महारथि कर्णका बुवा सूर्यदेव हुन् । सूर्यदेवले उनका निम्ति राजकुमारी कुन्तीको कोख सापटी लिएका छन् । राजकुमारी कुन्ती तिनै कुन्ती हुन्, जसले हस्तिनापुर नरेश पाण्डुसित विवाहपश्चात् पनि कोख सापटी दिने शिलशिला जारी नै राखेकी छन् । उनले पति पाण्डु सन्तानोत्पादन निम्ति असक्षम छन् भन्ने थाहा पाएपछि धर्मराज, वायुदेव र इन्द्रलाई कोख भाडामा लगाएर क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन र अर्जुनलाई जन्म दिएकी छन् । उनकी बहिनी (सौता) माद्री मात्र किन पछि पर्थिन् र पछि उनले पनि दिदी कुन्तीकै अनुशरण गर्दै अश्विनिकुमारलाई कोख भाडामा दिएर नकुल र सहदेवलाई जन्म दिएकी छन् ।
महाभारतकी नायिका द्रौपदी र रामायणकी नायिका सीता पनि एक किसिमले सापटी कोखकै उपज हुन् । महाभारतका अनुसार राजकुमारी द्रौपदीका बुवा पाञ्चाल (पञ्जाव ?) नरेश द्रुपद हुनु, जसले द्रौपदीका निम्ति अग्गिगर्भ (यज्ञकुण्ड) लाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । रामायणका अनुसार वैदेही सीताजीको जन्म दण्डकारन्य निवासी ऋषिहरूका रगतबाट भएको हो, जुन रगत लंकाधिपति रावणले सुनको घडामा बन्द गरी जमिनमा गाडेका थिए । पछि धर्तीको गर्भ भेदन गरी सोही रक्तघडाबाट सीताजी उत्पन्न भएकी थिइन्, जसलाई मिथिलाधिपति जनकले भेट्टाएका थिए ।
देवकुल र मनुष्य कुल मात्र नभई ऋषिकुल र असूर कुललाई समेत यसको हावाले छाडेको छैन । अयोध्या नरेश दशरथका ज्वाइँ महर्षि ऋष्यसृङ्ग विभाण्डक ऋषिका पुत्र हुन् । उनका जन्म निम्ति विभाण्डकका तर्फबाट मृगिणीको कोख प्रयोग भएका छन् । महारभारतमा व्यासजीले यसको रोचक झाँकी प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार १ दिन तलाउमा स्नान गर्न लागेको बखत उर्वशी अप्सराको नाङ्गो शरीर देखेर ऋषि विभाण्डकको वीर्य स्खलित भएको रहेछ । पछि सो पानी खाने मृगिणीलाई गर्भ रहेकाले सोही गर्भबाट ऋष्यसृङ्गको जन्म भएको हो, जसले ससुराबा दशरथका निम्ति पुत्रेष्टि गराएर राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघनको जन्म भएको थियो । असूरकूल शिरोमणि महषिसासुरका बुवा रम्भ दानव हुन्, जसले महिष (भैसी) को कोख सापटी लिएर उनलाई जन्माएका थिए । सरसर्ती अध्ययनमा भेटिएका केही केही उदाहरण हुन् यी । खोजेमा हिन्दू धर्मशास्त्रमा यस्ता अनगिन्ती उदाहरण पाउन सकिन्छ ।